Uma sikhuluma indlela yokwenza egqumeni alpine ngezandla zakho, kufanele siqale ngokucabangela imibono yayo. Lokhu element zokuhlobisa kungaba enezingqimba noma mpo, konke kuncike onjani sezwe endaweni yangakini. Kuye ngokuthi yiziphi izitshalo zikhethwa betshala ukuhlukanisa phakathi kwalezi zinhlobo rockeries:
- Isitayela Japanese, okuyinto ekhonze ku ubuhle itshe, futhi khona izitshalo kufanele kube sakugcina;
- Isitayela European, elihlanganisa izitshalo ezihlobisile futhi izimbali, esikhundleni nomunye ngenkathi, ukuhlinzeka njalo i Ukwakheka elikhangayo;
- isitayela English, lapho kubonelelwa kakhulu ama-umhlonyane, utshani kanye AmaConifers.
Ukukhuluma ngokuthi indlela yokwenza egqumeni alpine ngezandla zakhe, kufanele kuphawulwe ukubaluleka isikhundla salo lesifanele. Impumelelo okufana - egqumeni yemvelo ku yakho cottage ehlobo noma ingadi uzungu. Uma okunjalo akunakwenzeka, uzodinga ngesandla ukudala maholoholo. Kukhethwa indawo kufanele kusekelwe imithetho elandelayo. Isayithi kumele litholakale emini ngoba ilanga, okusho ukuthi kufanele uyokhanya, uma indawo ukubopha, inani izitshalo zikhule ezingaba endaweni enjalo ngeke kube okulinganiselwe kakhulu. Ukukhuluma ngokuthi indlela yokwenza slide eziphakeme, kufanele kuphawulwe ukuthi kuyoba ukubukeka olubi ngemuva kocingo. isizinda Kuhle kukhona nezihlahla. Kusebenza umthetho ofanayo ukuze ukubekwa odongeni endlini. Akukhona yimpumelelo futhi komakhelwane nge isihlahla esikhulu, njengoba ku isizinda esinjalo izitshalo giant lichaza ekwakheni abonakale elincane kakhulu.
Ukukhuluma mayelana nendlela ukwenza egqumeni alpine ngezandla zakho, ufuna ukumbonisa ukuthi ngisho ne izilinganiso infield nesizotha kakhulu musa abiza kakhulu usayizi nesizotha kwengoma. Uma kuziwa afana amatshe, khona-ke lapha kubalulekile ukuthi ayafana e isakhiwo kanye nemvelaphi, ngaphandle kwalokho uzothola Museum umonakalo omkhulu kakhulu. Ifanele ngekwetinhloso letehlukene namatshe ahlukahlukene. ubungako bawo akufanele kube okufanayo ukwenza alpine amagquma ngokwayo, kubalulekile ukubeka yibo omkhulu amazinga aphansi, kanti ezincane ezisetshenziswa ngenhla.
Ngo egqumeni alpine ngokuvamile lisetshenziswa ngamaqembu ahlukene izitshalo. Ungasebenzisa nezihlahla lezihlahla coniferous. Kulokhu, preference ukunikeza izitshalo ekhula ongaphakeme, kokuba ukukhula encane. izakhi okunjalo kuyoba izingoma ndaba. Laba bameleli be-ebalulekile abalandelayo Ezikhula iminyaka eminingi herbaceous ukuthi zifana ngokubukeka ukuze gornorastuschimi. Ivolumu ukwakheka kungenziwa egcwele cover emhlabathini izitshalo. Kuwufanele ukukhetha izinhlobo, akaphelelwa sikhalo salo ngisho emva zom. Ukukhuluma ngokuthi indlela yokwenza egqumeni alpine ngezandla zakhe, kwakudingekile ukugcizelela ukubaluleka kwezitshalo eziyizigaxa. Lezi zimbali uyokhanga zezimbali zayo zokuqala ezingu-efudumele kwentwasahlobo. Kufanele abeke kanye amalungu phansi-esehlanganise ukubheka Ukwakheka obunobunye.
Uma konke kuyakhethwa, kuyoba kuphela yakha esentabeni yakhe eziphakeme, okuyinto iminyaka eminingi angakunika lisebukhazikhazini balo.
Indlela ukulungiselela amazambane zokutshala